5 Kuhle Christmas izimakethe EJalimane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Kuhle Christmas izimakethe EJalimane
Ingabe ukholelwa ukuthi cishe ngaleso sikhathi konyaka futhi? Yisikhathi kakhulu amahle konyaka! uthole Ngempela emoyeni ne Kuhle Christmas izimakethe e-Germany! Kusukela ngasekupheleni kuka-November kuze Christmas Eve, izikwele edolobheni lonke elaseJalimane kuthiwa kuyachwaza izimakethe kaKhisimusi. Njengoba elinye lamasiko oyigugu kakhulu e Deutschland (EJalimane ngo-German), emadolobheni amakhulu nasemadolobheni amancane ngokufanayo ukugubha isizini obhekwe. Ngakho ubambe mug esishisayo gluhwein bese ulungela ukuba iwashi chestnut yokuwugazinga ku umlilo evulekile azinakuba miss iholide izindawo ezishisayo.
1. Frankfurt Romerberg Futhi St. Pauls Square Christmas Market
Yilokhu Kuhle Christmas izimakethe e-Germany amaphupho zakhiwe. Escape okumatasa Frankfurt ngaphakathi komuzi Old Town, jikisa Christmas Dreamland ngesikhathi sikaKhisimusi. Romerberg futhi St. Pauls square yakhiwa izindlu isigamu izingodo olunothile. Bagcwala maqhugwane lokhuni embozwe izibani, imihlobiso, futhi amagoda ezimbali. Qinisekisa ungalahlekelwa ethandwa liyakhanga we izinsimbi, a Christmas Eve isiko lapho izinsimbi zesonto of Old Town ezwakala ngokuvumelana bakuso sonke isifundazwe sase i ezimangalisayo ekhonsathini isipiliyoni.
A indaba ezincane kuno-Frankfurt, kodwa nje njengoba imilingo! Lena edolobhaneni elisendaweni ngaphakathi ezintabeni ngasemngceleni Belgium. Monschau ngempela elichwazayo ngesikhathi Christmas ne Kuhle Christmas izimakethe e-Germany.
Idolobhana Christmas imihlobiso okuye kwenziwa kuye kwabonisa ukuba zithandwa kakhulu kangangokuba abendawo ezivuleke ngonyaka round Indlu Christmas. Ngakho, uma ungangiboni like Christmas, ke lokhu akuyona neze indawo yokuhlala! Uhambo lwezinsuku baseCologne noma Dusseldorf, hamba ukubukela edolobheni ikhanyisa kusihlwa ngenkathi nibbling isifunda Monschauer Dutchen spongecake yabo futhi ephuza iwayini mulled ngaphambi ubuyele emuva edolobheni. Nge cobblestone yayo ezitaladini, iqhwa isipikili isigamu ugodo izindlu, futhi izinkampani ekusakazeni akulutho emfushane enhle.
Lena nakanjani omunye Europe kakhulu lamadolobha amahle medieval. It is olunothile ngakho kubukeka njenge-okuthwetshulelwa. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngesikhathi sikaKhisimusi kanye kuqokonyiswa ibamba ezinye Kuhle Christmas izimakethe e-Germany.
Ngalé kwezindaba esangweni futhi ukuzivikela kwemibhoshongo lidlulisela aura inganekwane. Njengoba singena ngaphakathi ngelinye lamasango ubudala, uyobe ngokushesha azizwe elondekile ngesikhathi izindonga ahlonishwe kule ndawo romantic. Rothenburg imilingo liye lanqoba past 1,000 iminyaka futhi uyaqhubeka waphonsa ukupela yayo ungene izivakashi ezazivela emhlabeni wonke.
Kusukela ngekhulu le-15, emakethe emangalisayo uKhisimusi uye sici samaholide sikaKhisimusi njalo. Le makethe Ungabheka back on a 500 isiko ngonyaka, futhi kusukela kulesi sikhathi uye ngokuhlakanipha zashintsha kancane kakhulu kusukela kwaqala zomlando. Izenzakalo eziningi kwamasiko aphethwe ngokuhlanganyela kule makethe. Okwavelela emakethe, Nokho, Akukhona ukubukeka we Rothenburg Riders, naye wanikeza lesi emakethe igama layo. Umsuka komlando nabagibeli uza kithi kusukela esikhathini esidlule dim nokude. Okhokho bethu babekholelwa ukuthi bangcono izithunywa ezivela kwelinye izwe, ngubani bentanta ngokusebenzisa esibhakabhakeni kanye imiphefumulo yabafile ngesikhathi sasebusika. Kodwa isithombe lo muntu okukhulunywa ngaye wasenganekwaneni uye zashintsha phakathi namakhulu eminyaka. Nakuba omunye esetshenziswa bathuthumele ngokwesaba phambi lesi sibalo okwesabisayo, namuhla, abasha nabadala sibheke phambili ukubuya kwakhe. Inkweli zasendle isibe isithunywa friendly.
Inkosi yakwa-Munich Christmas izimakethe futhi omunye Kuhle Christmas izimakethe e-Germany. Lokhu Christkindlmarkt ingatholakala Marienplatz, Munich esigcawini main, nge nezitebele zamahhashi ajabulisayo bechitha ukuphuma zingene eseduze yezitolo ezitaladini kanjalo.
Ngenxa yokuba sendaweni emaphakathi e Munich Old Town, lokhu iyona emakethe touristy kakhulu futhi ephithizelayo, kodwa ethandwa ngesizathu: Itafula ngemva kwesibaya bendabuko ngezandla yezandla, Ungadla ajabulisayo ngemali futhi okwenza zonke romantic kakhulu we Neues Rathaus. Qiniseka ukuthi duck ku egcekeni Rathaus ukubona nezitebele zamahhashi oluningi eposini Christkindl, lapho ungathola Christkindl isitembu esikhethekile ngifaka yakho / izinhlamvu.
PS: Ukuze uthole umbono extra imilingo, kufanele siqiniseke ukukhuphuka St Peters Isonto Tower ngemva kokushona kwelanga kakhulu!
5. I eNuremberg Christkindlesmarkt
I eNuremberg Christkindlesmarkt, or Nuremberg Christmas Market, kuyinto emakethe ngokobufakazi obukhona Germanys edume kunazo Christmas. Imakethe uKhisimusi ugujwa ngo-Nurembergs Main Market Square usukela emuva kumadokhumenti lokuqala likhuluma ngalo ngonyaka 1628, kodwa Nurembergers ukholwa ukuthi sihlehlela emuva nakakhulu.
Ukugcina isiko kubalulekile, futhi iningi nezitebele zamahhashi ukuthengisa izinto zabo ukuthengisa izinto zonke ezenziwe esifundeni. Ngisho nezitebele zamahhashi lokhuni benziwa ngesihlahla sonwele saseYurophu emi esifundeni itholakala!
Uzothola 180 maqhugwane lokhuni ukuthengisa konke kusukela bendabuko uwuthene Amadoda ukuhlobisa Nurembergers izindlu ngesikhathi sikaKhisimusi kuya Nuremberger Original ukuthi kungenziwa kuphela okuthiwa njengoba enjalo uma akhiqizwa phakathi komkhawulo edolobheni futhi inesisindo ngokunembile 23 amagremu.
Ready ukuzizwa magic of Christmas ngokuvakashela Kuhle Christmas izimakethe e-Germany? Ebese phezu ukuze Londoloza Isitimela futhi ukubhuka ithikithi kumaminithi!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Kuhle Christmas izimakethe EJalimane” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-christmas-markets-germany%2F%3Flang%3Dzu – (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)